नेपालमा भाषा साहित्यको बजार राम्रो छ : साजन के. सी. (अन्तर्वार्ता)
पुष २१, २०७६ रमेशचन्द्र घिमिरे
युवा आख्यानकार साजन के.सी. को ‘फिट्किरी’ उपन्यास भर्खरै मात्र शिखा बुक्स, काठमाडौंले प्रकाशन गरेको छ । त्यसै उपन्यास तथा उहाँको आख्यानकारिता एवम् रुचिहरूको केन्द्रीयतामा रहेर उहाँसँग सारङ्गी न्युजका लागि रमेशचन्द्र घिमिरेद्वारा लिइएको छोटो अन्तर्वार्ता :
* किन लेख्नुहुन्छ ?
~ दिमाखमा अनेकन कहानीहरू सल्बलाइराखेका हुन्छ्न् । तिनलाई बाहिर निकाल्न लेख्छु ।
* तपाईंको यसअघि कुनै सङ्ग्रह प्रकाशन भएको छ ?
~ यसअघि मेरो ‘आफ्टर लभ’ भन्ने अङ्ग्रेजी उपन्यास प्रकाशन भइसकेको छ, जुन एडुकेसन बुक्स हाउसले बजारमा ल्याएको हो ।
* अङ्ग्रेजी लेख्दा लेख्दै नेपालीमा कसरी आउनुभयो ?
~ यो मेरो लागि एउटा प्रयोग पनि हो र मलाई लाग्छ नेपालमा नेपाली भाषा साहित्यको बजार राम्रो छ । प्रतिस्पर्धा पनि उत्तिकै छ । प्रतिस्पर्धाले पनि हो, एक लेखकको लेखन खरो बनाउने ।
* लेखनसिवाय अरू के के गर्नुहुन्छ ?
~ म किराहरूको रिसर्च गर्छु । खासगरी पुतली र खपाटे किराहरू मलाई निकै मन पर्छन् । म यिनीहरूको जैविक विविधताबारे रिसर्च गरिरहेको छु । कहिलेकाहीँ लेख्दालेख्दै अल्छी लागे क्यामरा बोकेर किराहरूको फोटोग्राफी गर्न निस्कन्छु ।
* हबिजहरू के के पाल्नुभएको छ ?
~ फिलिम हेर्छु । यसमा मलाई सबैभन्दा मन पर्ने विधा सस्पेन्स थ्रिलर हो । सकेसम्म सस्पेन्स थ्रिलर मुभिज खोजीखोजी हेर्न रुचाउँछु । हालैमा रिलिज भएको अक्षय खन्नाको सेक्सन् ३७५ निकै राम्रो लागेको थियो । त्योबाहेक म म्युजिक एकदमै सुन्छु । बिटल्स्, बब डिलेन, जगजीत सिंघ, अरिजीत सिंघ र नारायण गोपाल मेरा फेब्रेट हुन् । साथसाथै मैले अघि भनेजस्तै किराहरूको फोटोग्राफी गर्दै ट्राभल गर्नु मेरो अर्को सौख हो ।
* ‘फिट्किरी’ लेख्न कति समय लाग्यो ?
~ सायद चार महिनामा पहिलो ड्राफ्ट सकेँ क्यारे । तर त्यसपछिका दुई वर्ष मैले केही लेखिनँ । खाली किराहरूको रिसर्च मात्र गरिबसेँ त्यसैले किताब आउन ढिला भयो ।
* कति वर्षको उमेरबाट आख्यान लेख्न थाल्नुभयो ?
~ खास आख्यान लेख्न सुरु गरेको म ८ कक्षा पढ्दादेखिन् हो । त्यतिबेला म अङ्ग्रेजीमा फुट्कर कथाहरू लेख्थेँ अनि आफूले लेखेको टिचरलाई देखाउथेँ । नेपाली लेख्न थालेको त जम्मा ४ वर्ष जति भयो होला । नेपालीमा सुरुमा लेखेको भनेको नै फिट्किरी हो ।
* फेब्रेट बुक्स कुनकुन छन् ?
~ नेपालीमा नारायण वाग्लेको पल्पसा क्याफे मेरो अल्टायम फेब्रेट बुक हो । अङ्ग्रेजीमा जापानीज राइटर हारुकी मुराकामीको जे रुबिनद्वारा अनुवादित नार्विजन वुड नै हो । केन फलेटका ऐतिहासिक आख्यान पनि खूबै मन पर्छ । गए दिन म स्टेफेन किङ् पढ्दै छु ।
* फिट्किरीको प्रतिक्रया कस्तो आइरहेको छ त ?
~ अहिले खासै आइसकेको छैन । सायद धेरै पाठकहरूको हातमा परिसकेको नभएर होला । तर जतिले पढिसक्नुभएको छ, मन पराइदिनुभएको छ । यसैमा नै म सन्तुष्ट छु । नेपालीमा पहिलो कोसिस भएर होला, अलिअलि कमी–कमजोरीहरू छन्, त्यो पनि पहिल्याइदिनुभएको छ ।
* तेस्रो पुस्तकको पनि तयारी गर्दै हुनुहुन्छ कि ?
~ अहिले गरिसकेको छैन । सायद अब छिट्टै केही सुरु गर्छु ।
* अब अङ्ग्रेजीमा लेख्नुहुन्छ होला कि नेपालीमा ?
~ त्यो पनि अहिलेलाई सोचिसकेको छैन । ‘फिट्किरी’ अझै धेरै पाठकहरूले मन पराइदिनुभयो भने सायद नेपालीमा नै लेख्छु ।
* अन्त्यमा केही भन्नु छ कि ?
~ मेरो लेखन र नयाँ उपन्यासका बारेमा चासो राखेर मलाई पाठक समक्ष पुग्ने मौका दिनुभएकोमा तपाईं र सारङ्गी न्यूज टिमप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु, धन्यवाद !
सोमवार, पुष २१, २०७६, ०९:०१:००
चैत्र १७, २०७६ रमेशचन्द्र घिमिरे
चैत्र १६, २०७६ रमेशचन्द्र घिमिरे